Mpiasan'ny fahasalamana nokapohin'ny COVID miady ho an'ny tombontsoa fanonerana
Hatramin'izao dia tsy maintsy noporofoin'ireo mpiasa fa voan'ny aretina ilay asa. Fa fanjakana 16 izao no mihevitra ny hametraka ny onjam-pitsaboana amin'ny hopitaly: asehoy fa tsy nahazo ilay aretina ilay mpiasa.
Ny iray amin'ireo singa marobe mahatonga an'io aretina coronavirus 2019 (COVID-19) io dia sarotra tokoa ny mitsabo azy dia ny tsy ahafahan'ny olona mamaritra tsara hoe aiza na aiza no mety nahazoan'ny olona iray ilay aretina. Ireo mpiasan'ny fahasalamana nahazo COVID-19 (sy ireo fianakavian'ny mpiasan'ny fahasalamana maty noho ny aretina) dia mahita fa ny fiezahana hahazo tombontsoa ho an'ny mpiasa na tombony ho an'ny fahafatesana dia mety tsy ho vita mihitsy, hoy ny tatitra nataon'ny Kaiser Health News (KHN) androany.
Hatramin'izao, ireo mpiasa dia tsy maintsy nanaporofo fa nahavoa izy ireo tamin'io asa io, fa tsy ady hevitra mora handresena raha toa ka be dia be ireo mpitatitra asymptomatika mivoaka eo amin'ny fiarahamonina.
Ankehitriny, hoy ny KHN, fanjakana 16 sy Puerto Rico no te hametraka ny onjam-pitsaboana amin'ny hopitaly: manaporofo fa tsy nahazo ilay aretina tamin'ilay asa ilay mpiasa.
"Samy hafa ny volavolan-dalàna eo amin'ny sehatry ny mpiasa takian'izy ireo," hoy ny tatitry ny KHN. “Ny sasany miaro izay rehetra nandao ny trano hiasany mandritra ny baikon'ny trano. Ny hafa dia voafetra ho an'ireo mpamaly voalohany sy mpiasan'ny fahasalamana ihany. Ny sasany dia tsy maintsy miasa afa-tsy ireo mpiasa marary mandritra ny vanim-potoana vonjy maika, fa ny sasany kosa maharitra fotoana lava kokoa. ”
Samy hafa ny fomba fandraisan'ny fanjakana isan-karazany, ary ny sasany amin'ireo fomba fanao ireo dia toherin'ny hopitaly sy ny fikambanana orinasa. KHN dia mitanisa volavolan-dalàna any New Jersey izay manamora ny fahaizan'ny mpiasa tena ilaina izay nahazo COVID-19 nandritra ny vanim-potoana vonjy maika nanaporofo fa nahazo io asa io izy ireo.
Chrissy Buteas no tompon'andraikitra amin'ny raharaham-panjakana ao amin'ny New Jersey Business & Industry Association, izay manohitra ny volavolan-dalàna, izay lanin'ny Senate State ary miandry ny General Assembly. "Ny ahiahinay voalohany dia ny fahafahan'ny vidin'ireto fanambarana ireto manenika ny rafitra izay tsy natao hikirakirana ny fitakiana nandritra ny areti-mandringana manerantany," hoy i Buteas.
KHN koa dia nijery tranga iray tany Virginia izay nahitana mpanampy dokotera (PA) izay nanao fitsapana COVID tsy maintsy nampidirina hopitaly rehefa nidina niaraka tamin'ny aretina nandritra ny herinandro izy, ary tsy nahita asa intsony nandritra ny dimy herinandro.
Nangataka ny PA hameno ny taratasy fanonerana ny mpiasa. Nolavina ireo taratasy fangatahana azy ireo ary avy eo nesorina dimy andro taty aoriana, miaraka amin'ny faktiora 60 000 $ amin'ny hopitaly. Ny mpisolovava Michele Lewane dia misolo tena ny PA amin'ity raharaha ity. Araka ny KHN: "Nilaza i Lewane fa ny lalàna any Virginia dia mety hihevitra ny COVID-19 ho 'aretina mahazatra amin'ny fiainana', mitovy amin'ny sery na gripa. Nilaza izy fa mila manaporofo amin'ny alàlan'ny “porofo mazava sy maharesy lahatra” fa tratran'ny virus coronavirus tany am-piasana izy. ”